Home - Mawk Kon
JPF (Joint Peace Fund)
Nutrition and Livelihood Strengthening ,Eastern Shan State
Nutrition and Livelihood Strengthening, Eastern Shan State
Migrant Resource Center (Keng Tong)
Migrant Resource Center (Tachileik)
Improving Livelihood Through Civic Society Project
Prevention of Human Trafficking on Child, Youth and Women
Building Capacity of Civil Society Organization through Livelihood Project and Food Security and Livelihood Development Project
Diffusing civil society practices to address the most pressing needs of target communication
“ တူညီတိုးတက်၊ ရှေ့ဆက်ဖို့၊ ချိတ်ဆက်ကြစို့၊ မော်ကွမ်သို့ ”
Mawk Kon Youth has been organized since 2004 with the leading of youth leaders of Shan Literature and Cultural Committee (SLCC) in Eastern Shan State to promote leadership skill among youths, to give development awareness and adolescent life skills for youths, and to provide livelihood opportunities for the youths. Mawk Kon Youth aims to be local non-government organization to contribute regional development by focusing on capacity building of youths and provide livelihood opportunities towards village communities in Eastern Shan State. The group was simply named as Mawk Kon (Cherry), which is the symbolic flower of Shan State.
Shan Literature and Cultural Committee was established in 1997 and empowered youth in upholding literature and cultural, based in Keng Tung ,Eastern State. The committee has been functioning well and major activities including organizing Annual Shan New Year Festival, Shan literature trainings and strengthening networks with other Literature and Cultural Associations.
In 2004,anumber of meetings were conducted by Shan Literature and Cultural Committees on holding Shan New Year. Meanwhile, they noticed that there was hardly any youth who could lead the program. The youth then were found facing with high risk of being infected with HIV/AIDS and could not reach up to leadership level, due to lack of knowledge, experience, pioneers, and resource opportunities. Thus, the committee members had madeadecision to formayouth group and implement the program, realizing the important role of capacity building for youth. Then, this group, Mawk Kon Youth, has been formed under the guidance of Shan Literature and Cultural Committee since then. Since in its initial, the leader who has been operating the program is Daw Nang Voe Phart. The group has begun its operation with the capital of 700,000 kyats, 200,000 kyats from SLCC and 500,000 kyats from local businessmen. Mawk Kon Youth has been implementing the following planned activities:
Agricultural, Livestock skill training, Vocational skill trainings
Anti-trafficking and safe migration awareness
Women Exchange Program
Summer youth literature campaign
Life skills training series in Eastern Shan State with local fund raising till 2009
From 2004 to 2009, the beneficiaries have been reaching over 2000 youths per every year. 66 Youth leaders have been turned out trained. Mawk Kon Youth received technical supports and collaboration from Northern Shan/ Southern Shan/ National Shan Literature and Cultural Association, Keng Tong Township Health Department, Township STI/HIV development, and World Vision Myanmar Keng Tong Project.
Since 2011, Mawk Kon Youth has changed its name as ‘Mawk Kon Local Development Organization’ and applied for official registration in 2012. In July 2014, MKLDO gained official registration and has been implementing development projects and civic empowerment project such as food security and livelihood, capacity building program on vocational skills, health, leadership and awareness program on forced labour project. The donor agencies were SWISSAID Myanmar, LIFT (Livelihood Improving Food Security Trust Fund), Paungku, Yinthwe Foundation, US Embusy, European Union(EU) , ILO , USAID ,.GIZ.and MIID.
Previous Grant Experience: MKLDO isaregistered local NGO and an active member of Food Security Working Group and Myanmar NGO Network. The Program Director has more than (15) years of experience regarding development field and multi-sectoral development programs, more than (5) years of experience in overseeing integrated farming and value change development and more than (8) years of experience in strengthening village-based Civil Society Organizations. It has been implementing an integrated program in the proposed target villages and other villages since October April 2009. The grant experiences of MKLDO:
Key activities included capacity building of youths regarding Reproductive Health, HIV/AIDS, trafficking in person, vocational skills and leadership.Food security and Livelihood,
Improving livelihood through civil society strengthening project.and Prevention of Humen Trafficking on Children, Youth and Women.Safe Migration Awareness Raising.
Mawk Kon Local Development Organization
ထိုင်း-မလေးရှား နှင့် ထိုင်း-လာအိုနယ်စပ်ဖွင့်ပြီ . နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုပြန်လည်နားလန်ထူရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မလေးရှား နှင့် လာအိုနိုင်ငံတို့ က နယ်စပ်ဂိတ်များဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံးလူမှုူကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ . မလေးရှားနှင့်လာအိုအာဏာပိုင်တို့က ထိုင်းအစိုးရ၏ “နှစ်နိုင်ငံ ရည်မှန်းချက်တစ်ခု” ခရီးသွားမူဝါဒကို လက်ခံကြိုဆိုကြောင်း ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး(ငြိမ်း) ပရာယွတ် ကျန်အိုချာ ကဆိုသည်။ . ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း နရာသီဝခရိုင်နှင့်ထိစပ်နေသော မလေးနယ်စပ် ၃ ခုကို မလေးရှားအာဏာပိုင် ဘက်ကဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး ၂ ကြိမ်ထိုးနှံထားကာ Mysejahtera အပ်ပလီကေး ရှင်းတွင် ၂ ရက်ကြိုတင်၍စာရင်းပေးထားသူများကို ဝင်-ထွက်ခွင့်ပြုနေသည်ဟု ဆိုသည်။ . အလားတူလာအိုနိုင်ငံဘက်ကလည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်စပ်ဂိတ်များကို အလုံးစုံဖွင့်ပေးလိုက်ပြီး နေရင်းနိုင်ငံမှမထွက်ခွာလာမီ ၄၈ နာရီအတွင်း ATK ဖြင့်ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေးထားသည့်အဖြေကို ပြရုံဖြင့် ဝင်-ထွက်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ လာအိုနိုင်ငံသို့ဆိုက်ရောက်လာသည့်အခါတွင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ထပ်မံ စစ်ဆေးရန်မလိုကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ . မလေးရှားနှင့်လာအိုနိုင်ငံတို့က နှစ်နိုင်ငံကူးလူးသွားလာခွင့်ကိုတံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းသည် ကောင်းမွန် သည့်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထင်ဟနေပြီး နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးပြန်လည်အသက်ဝင်လာစေရန် ပူးပေါင်းအားထုတ်မှုတစ်ရပ်လည်းဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က မှတ်ချက်ပေးသည်။ . ထိုင်း-ကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်ဂိတ်များကိုလည်း လွန်ခဲ့သည့် မေလ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဟု သိရသည်။ . ပလာတူး . #Myanmar #Thailand #Journal #freecopy #mahachai #Mingalapar #samutsakorn #betterlife #BKK #Covid19TH #Malaysia #Lao ... See MoreSee Less
🙏🙏🙏အားလုံးပဲ မဂ်လာပါ အစ်ဆာရာက မိသားစုတွေကတော့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ အလုပ်ရှာဖွေနေသူတွေအတွက် တနေ့နဲ့တနေ့ မရိုးရလေအောင် အကျိုးရှိပြီး စိတ်ဝင်စားစေမယ့် အရာတွေကို အမြဲ ရှာဖွေ တင်ပြပေးနေပါတယ်။ 🗓🗓မေလ ၁ ရက်နေ့ ညနေ က အစ်ဆာရာဖေ့ဘုတ်ကနေ LIVE တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုလေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီနေ့မှာ တက်တက်ကြွကြွ နဲ့ အချိန်ပေးပြီး လာရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့ ‌ထိုင်းနိုင်ငံကရွှေအိပ်မက် သံတမန်တွေဖြစ်တဲ့ မအေးအေးအောင်၊ ကိုဝဏ္ဏ နဲ့ ကိုကျော်ကျော်တို့ကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားပါရစေ။ ✅✅အဲ့ဒီ့ Livestream လေးမှာဆိုရင်တော့ အလုပ်ရှာနေစဉ်မှာ သိထားဖို့ လိုတဲ့အချက်တွေ၊ စာချုပ်ပါအချက်တွေကိုသေချာလေ့လာဖို့၊ ပွဲစားတွေရဲ့လှည့်ကွက်တွေကိုသတိထားဖို့ နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာ သိထားသင့်တဲ့ အရာတွေကိုပါ ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ 🤝🤝အဲ့ဒီလို LIVE မျိုးလေးတွေကိုလဲ နောက်ထပ် တင်ဆက်ပေးမှာမို့ လူကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဆွေးနွေးလိုသူတွေ၊ ဆွေးနွေးပေးရမယ့် အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အကြံပြုချင်တာတွေကို ဒီပိုစ့်ရဲ့ ကောမန့်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ အစ်ဆာရာ ဖေ့ဘုတ်ရဲ့ မက်ဆင်ဂျာမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အစ်ဆာရာရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တဲ့ (ထိုင်း) ၁၈၀၀၀ ၁၀ ၁၈၀ (မြန်မာ) ၀၉ ၇၆ ၅၀၀၀ ၁၅၀ ကိုဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ် အကြံပြုပေးကြပါနော်။ Live ဗီဒီယိုလင့်: web.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=326297012907661 ... See MoreSee Less
“အယုဒ္ဓယခရိုင်ရှိ အလုပ်ခွင်တစ်ခု၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ အလုပ်ရှင်၏ မတရားဖိနိပ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းခံရမှု အလုပ်ရှင်ကို အရေးယူနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဆူချတ် ကြိုပမ်းနေ” ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၁၀ ရက် မေလ၊ ၈ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အယုဒ္ဓယခရိုင်တွင်းရှိ အလုပ်ရုံတစ်ခု၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ရွေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမား (၂၃) ဦးနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားအလုပ်သမား (၁၁) ဦးတို့ အလုပ်ရှင်၏ မတရားဖိနိပ်အနိုင်ကျင့်ခြင်းခံရမှုအား စစ်ဆေးအရေးယူနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်သမား အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးကွန်ရက်ဖောင်ဒေးရှင်း (LPN)က အလုပ်သမားဝန်ကြီးထံ ကူညီတောင်းခံထားပြီးနောက် ဝန်ကြီးမှ တာဝန်ရှိသူများအား ထိုလုပ်ရုံသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးရန် စေလွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကနဉီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်မှာ ထိုအလုပ်ရုံထဲ၌ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမား (၂၃) ဦးမှာ မည်သည့် အထောက်အထားမှမရှိဟု စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး (၂) ဦးမှာလည်း ကိုဗစ် (၁၉) ရောဂါကူးစက်ခံထားရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရောဂါကူးစက်ခံရသူကို ထနူမြို့၊ အုထိုင်ကျေးရွာမှာ ကုသမှုခံယူးရန် ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျန်အလုပ်သမား (၂၃) ဦးအား ကူညီပေးရန် အလုပ်အကိုင်ဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားကာကွယ်ရေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဦးစီးဌာနအား တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။ အလုပ်ပြောင်းလဲပေးခြင်းနှင့် အလုပ်နေရာပြောင်းပေးရန်လိုအပ်နေသူမှာ (၂၅) ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့သည် (MOU)စနစ်ဖြင့် ဝင်လာသူ၊ ပန်းရောင်းကဒ်ပြားကိုင်ဆောင်ထားသူနှင့် ထိုင်းအစိုးရ၏ သဘောတူညီမှုဆုံးဖြတ်ချက်အရ အလုပ်သမားအုပ်စုတို့ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းထဲကအနက် အလုပ်သမား (၁၃) ဦးမှာ အလုပ်အလုပ်ခွင့်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းတို့ လိုအပ်နေကြောင်း သိရပါသည်။ အဆိုပါ ဖိနိပ်ခြင်းခံရသည့် အလုပ်သမားတို့ကို အယုဒ္ဓယခရိုင်မှ စရာ့ဘူရီခရိုင်သို့ စနစ်တကျ အလုပ်နေရာပြောင်းလဲပေးရန်အတွက် အလုပ်သမားတို့ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အထောက်အထားများအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ခရိုင်အလုပ်အကိုင်ဦးစီးဌာနမှ အလုပ်သမား အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေးကွန်ရက်ဖောင်ဒေးရှင်း (LPN)ကို ကနဦး ချိန်းဆိုထားပါသည်။ #Migrant _Times #Migrantworkers #Myanmar #Cambodia #Covid19TH Source - inn news Thailand ... See MoreSee Less
“ ထိုင်းအာဏာပိုင်မှ မြန်မာလုပ်သားတစ်ဦးအား သေနတ်ဖြင့် ဆယ်ချက်ခန့်ပစ်သတ်ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းဖြစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ယနေ့ စစ်ကြောရေးပြုလုပ်မည်ဟု သိရ” ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ၊ ၈ ရက် မေလ၊ ၆ ရက်နေ့၏ အချိန်မနက် (၇) နာရီမှာ ပရာကျွပ်ခီလီခမ်ခရိုင်၊ Muangပရာကျွပ်မြို့၊ အုပ်စု (၈)၊ ကော့လတ်ရွာအတွင်း၌ရှိ လုံခြုံရေးစစ်ဆေးဂိတ်တွင် တာဝန်ကျ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှ ကားတစ်စီးအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ကာ အဆိုပါကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာသည့် အသက် (၃၅) နှစ်အရွယ် မြန်မာတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ကျန်သုံးဦးမှာ အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့သည်ဟု ထိုင်းသတင်းဌာန၏ ဖော်ပြချက်အရသည်ရပါတယ်။ အလားတူ ၎င်းအမှုဖြစ်ပွားရာနေရာနှင့်အနီးရှိ တောတတောအတွင်းမှာ ပုန်းအောင်းနေသည့် အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာလုပ်သား (၁၀) ဦးတို့ကိုလည်း အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် အထက်အဏာပိုင်များက အဆိုအပါဖြစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် (၁၅) ဦးကို တာဝန်အရ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခြင်းဟုတ်မဟုတ်နှင့် မလိုအပ်ဘဲ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို ယနေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာတို့က စစ်ကြောရေးပြုလုပ်မည်ဟု သိရပါသည်။ #Migrant #Times #Myanmar #Thailand #Migrantworkers #Illegalmigration #Illegalmigrantworkers #Shotdead Source - MATICHON ONLINE (มติชน ออนไลน์) ... See MoreSee Less